5 comments: to “ ”
အခုတစ်လော cbox ပြဿနာတွေရှိနေတော့ cbox မှာ စာတွေရေးခဲ့ဖို အခက်ခဲလေးတွေဖြစ်နေကြတယ် www.chitkalay.blogspot.com မှာ ကြည့်ပီ nerworx က box ကို လုပ်ကြည့်ပါလား
ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ်လာလည်ပါတယ်။ စီဘောက်စ်မှာ မြင်မှစသိတဲ့ ဘလော့ဂ်က ရေးနေတာ မတ်လ ကတည်းကကိုး.. :)။ ဘလော့ဂ်ရေးတယ် ဆိုတာကတော့ ဒီလိုပါပဲဗျာ။ ရသ ရေး ရေးပြန်ပြီ။ သုတရေးတော့ရော...??။ ၀ီကီပီဒီယမှာ ရှိသားပဲလို့ ပြောပြန်ဦးမှာ သေချာတယ်။ ဟော..အယူအဆရေးရာ ရေးပြန်တော့လဲ ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူသူ၊ အဲဒီထက်ပိုလာရင်တော့ ကိုယ့်ကို ကြည့်မရသူ၊ မုန်းတီးသူက ဆော်ပလော်တီးပြန်ရော...။ အားငယ်စရာ ဘာမှ မရှိပါဘူးဗျာ။ လူအများကြီးက ကိုယ့်ကို နားမလည်ပေးရင်တောင် တယောက်တလေက အားပေးဖော်ရနေသေးရင် အဲဒါ အားဆေးပါ။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျနော်လဲ ခံစားချက်တချို့နဲ့ ကိုက်နေသလိုဖြစ်လို့ လေကြော အတော်ရှည်မိသွားပြီ။ :) ကျနော့်ဆီမှာလည်း လာလည်လို့ ဝေဖန်ချင်တာရှိရင် ကြိုက်သလိုသာ ဝေဖန်ပါ။ ကျနော့်ကတော့ အရေတော်တော်ထူနေပြီ။ :))
အားပေးဒယ်.. အားပေးဒယ်... ရေးသာရေး.. :D
Blog is freedom to write.It isalocation where we can express our feelings freely.You may get suggestions those you may like or dislike.But you can accept whatever you like.Care for nothing!We have short time to live or survive.We have much things those are rather important than anyone's suggestion. Carry on your stuff.
လူတိုင်းလူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ၊ ရိုးသားစွာ ရေးသားနိုင်တဲ့ဘလောက်အပေါ် တူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ အားပေးကြတဲ့ ဘလောက်သူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးပါလို့...